Ma dhaba in dal carabeed caqabad ku ah yahay dhexaadinta Ethiopia ka dhex wado dowladaha Eriterea iyo Jabuuti? – Xeernews24
Ma dhaba in dal carabeed caqabad ku ah yahay dhexaadinta Ethiopia ka dhex wado dowladaha Eriterea iyo Jabuuti?
26. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Dowlada Ethiopia ayaa ku hamineysa inay dhex dhexaad ka noqoto khilaafka labada dal, isla markaana xal ka dhex abuurta si loogu wada noolado geeska Afrka deganaansho iyo nabad.
Ethiopia oo dhawaan sheegtay inay qaadeyso talaabo lagu dhex dhexaadinayo labada dal ee jabuuti iyo Erytrea , ayaa waxaa hadana soo baxaaya warar hoose oo sheegaaya in go’aanka ay ku dhex dhexaadin laheyd ay caqabad ku tahay dowlada boqortooyadda Sacuudiga.
Dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudiga Mohammed Bin Salman, ayaa Ra’isul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ka hortaagan xalinta khilaafka labada dal, waxaa uuna ku cadaadinayaa inuu faraha kala baxo Khilaafka Eriterea iyo Jabuuti.
Mohammed Bin Salman,ayaa la sheegay in uu khadka teleefanka uu kula hadlay Ra’isul wasaare Abiy Axmed oo ay ka go’an tahay dhex dhexaadinta labada dal waxa ayna kawada hadleen qaab waliba oo lagu joojin karo dhex dhexaadinta, wallow Abiy Axmed uusan wali qaadan wax go’aan ah.
Mohammed Bin Salman, ayaa Siyaasad ahaan la safan dowlada Eriterea oo dhul baaxad weyn iyo maxaabiis ka heysata Jabouti, waxa uuna aad uga soo horjeeda in wadahadalka labadaasi dal ay Jabuuti ku hesho dhulka iyo maxaabiista ay ka heysato Eriterea.
Sidoo kale, Dowlada Sacuudiga ayaa arrinta lagu cadaadinaayo Jabuuti kula gol leh is garabtaag ay u muujineyso dowlada Imaaraadka iyo Eriterea oo ka mideysan inaan lala heshiin Jabuuti.
Si kastaba ha ahaatee, dowlada Ethiopia oo culeys weyn kala kulmeysa dowlada Sacuudiga ayan la ogeyn waxa kala gudboon dhex dhexaadinta dowladaha Eriterea iyo Jabuuti, wallow ay muuqaneyso in arrinta dhex dhexaadinta loo soo weeciyay Somalia oo la filaayo inay u kala dabqaado labada Madaxweyne ee Afwerki iyo Geele.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/iog-and-afowerki.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-26 13:25:442018-08-26 13:25:44Ma dhaba in dal carabeed caqabad ku ah yahay dhexaadinta Ethiopia ka dhex wado dowladaha Eriterea iyo Jabuuti?
Madaxweyne ku xiggen cusub ahna madaxweynaha ku meel gaadhka ah ee Soomaali...